ေဗဒင္ Archives - Thuta Music
တနဂၤေႏြ -ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာမွာ No.1 -႐ုပ္တည္ႀကီးေနတတ္ေပမယ့္..တကယ္ခင္သြားရင္လဲသူငယ္ခ်င္းအဖြဲ႕ထဲမွာမ်က္ႏွာအေျပာင္ဆုံးကသူပဲ -အခ်စ္ႀကီးသေလာက္ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ အရမ္းကံေခတယ္ရတာမလိုလိုတာမရေတြေလ. -အစြဲလန္းလဲႀကီးတယ္ခ်စ္ၿပီဆို တျခားလူနဲ႔မတူသလိုမုန္းၿပီဆိုလဲ လွည့္မၾကည့္တတ္ဘူး… – အေခ်ာႀကီးမဟုတ္ေပမယ့္ဆြဲေဆာင္မႈအရမ္းရွိတယ္ညိဳ႕အားအျပင္းဆုံးက အသံ💙 (အသံေလးၾကားဖူး႐ုံနဲ႔တင္ စြဲလန္းသြားေစတာမ်ိဳး🙉🙆‍♂🙆‍♀) တနလၤာ -အထာက်တဲ့ ေနရာမွာ No. 1 -တခုခုဆို အရမ္းျပတ္သားတယ္ေျပာစရာရွိရင္ ဘယ့္သူ႔ကိုမွာ အားမနာတတ္ဘူး -မွန္တဲ့ ဖက္က ရပ္တည္တာမ်ိဳးေပါ့.. -ရန္လိုတဲ့လူ နဲနဲမ်ားတယ္ ဒါမယ့္ဘသူ႔ကိုမွသိပ္ဂ႐ုမစိုက္တတ္ဘူး…ဘလိုအေျခေနပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆိုင္ရဲတဲ့ သတၱိရွိတယ္ -အေပါင္းသင္းဆိုလဲ ေ႐ြးၿပီးပဲေပါင္းတယ္ အုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ သိပ္မထားတတ္ဘူးအတုေယာင္ေတြကို မုန္းလို႔တဲ့ေလ – ညိဳ႕အားအျပင္းဆုံးက ခႏၶာကိုယ္💙(ေယာက်ာ္းေလးဆို အရမ္းခန္႔ၿပီးမိန္းကေလးဆိုလဲ အခ်ိဳးအစားက်တယ္..ဆြဲေဆာင္မႈအရမ္းရွိတယ္) အဂၤါ -ဆရာႀကီး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ No.1 -ေျပာသာေျပာတာေနာ္ ၾသဇာက အရမ္းေညာင္းတယ္ -လူခ်စ္လူခင္လဲေပါတယ္ လူတိုင္းကလဲယုံၾကည္တယ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ပီသတဲ့ … Read more
အရမ္းမွန္လို႔ ထပ္ခါထပ္ခါတင္ျဖစ္တဲ့… . ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား…👍👍 ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား… အျမဲတမ္​းလူႀကီးတစ္​​ေယာက္​လို ရင့္​က်က္​ခ်င္​​ေယာင္​​ေဆာင္​​တတ္​​ေပမ့ဲ က​ေလးစိတ္​က​ေတာ့ လံုးဝမ​ေပ်ာက​္​​ေသးပါဘူး… အရမ်းမှန်လို့ ထပ်ခါထပ်ခါတင်ဖြစ်တဲ့… . ( ၇ ) ရက်သားသမီးများအကြောင်းနှင့်စိတ်နေစိတ်ထားများ…👍👍 ( ၇ ) ရက်သားသမီးများအကြောင်းနှင့်စိတ်နေစိတ်ထားများ… တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အကြောင်း အရမ်းကြီးချောတဲ့ထဲမပါပေမဲ့ ရုပ်မဆိုးကြပါဘူး နှုတ်ခမ်းအလှပိုင်ရှင်တွေလဲဖြစ်တယ်… အိပ်တယ်ဆိုတာ သူ့တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးဝါသနာပါ …အစောကြီးထရတာလဲ သေအောင်မုန်းတယ်…. သီချင်းတွေဟာ သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းတွေပါ… စိတ်ညစ်စရာရှိရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပဲ တစ်ယောက်ထဲသာဝမ်းနည်းနေတတ်ပါတယ်… တစ်ယောက်ထဲအေးဆေးနေရတာကို နှစ်သက်တဲ့ သူတွေပါ… အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုသာ ရွေးချယ်တတ်သူတွေပါ….ငွေကြေးမှာလဲ လက်အရမ်းဖွာတယ်…. အမြဲတမ်းလူကြီးတစ်ယောက်လို ရင့်ကျက်ချင်ယောင်ဆောင်တတ်ပေမဲ့ ကလေးစိတ်ကတော့ လုံးဝမပျောက်သေးပါဘူး… … Read more
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ၂၀၂၁ တစ်နှစ်စာအထူးဟောစာတမ်းဗေဒင်
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ၂၀၂၁ တစ်နှစ်စာအထူးဟောစာတမ်းဗေဒင် ခုနစ်ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ !ဒီနှစ်များမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲလာမလဲ ? ကံကြမ္မာရေးရာ အဖြာဖြာကို သိရှိနိုင်ဖို့ အခုပဲ တစ်နှစ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်းမှာ ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။ အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာရပ်အတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်.. စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးများကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင် ကြပါစေ.. Sunday Monday Tuesday Wednestday Thursday Friday Satday Sir Min Thein Kha … Read more
2021ခုႏွစ္ (3)လပိုင္းအတြက္တစ္လစာ ကံၾကမၼာအထူးေဟာစာတမ္..
မင်္ဂလာပါ 2021ခုနှစ် (3)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟာစာတမ်း 1.3.2021မှ 31.3.2021ထိ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် 1.3.2021မှ 31.3.2021ထိ (1)လစာဟောစာတမ်း သူတစ်ပါးငွေများ ကိုင်ခြင်း အာမခံခြင်းများ မလုပ်ပါနှင့်ပြသာနာ တက်ရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရေးတွင် အထူးကံကောင်းကျိုးပြုလာမည်။အချစ်ရေး၌ စန်းပွင့်ပြီး လူငယ်လူရွှယ်များအနေဖြင့် နှလုံးသားရေးရာများတွင် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကြောင့်စိတ်မောရတတ်သည်။ ပညာရေး၌ ရှေ့ပိုင်းကာလတွင် မရောင်မလည်ဖြစ်နေတတ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းမှအဆင်ပြေ အောင်မြင်နိုင်ကိန်းရှိသည်။ကျန်းမာရေးမှာ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိတတ်မည်။လူမှုရေး၌ အထူးလူချစ်လူခင်ပေါ်များမည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး မပြေပြစ်စေကာမူ တပည့်လက်သားအလုပ်သမားတို့နှင့် အဆင်ပြေ တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်၏။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ဆုံးရှုံးထားသောငွေများ ပြန်လည်အဆင်ပြေလာမည်။ကား၊ကျောက်၊များအရောင်းဝယ်ကံကောင်းမည်။ ယတြာ။ ။မိမိမွေးနေ့တွင် ဇော်စိမ်း(၉)ခက်(သို့မဟုတ်) ဇွန်(၉)ညွန့်ဘုရားမှာလှူပေးပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like and Shareပေးကြပါ….။ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656 (viber) တနင်္လာသားသမီးများအတွက် 1.3.2021မှ 31.3.2021ထိ (1)လစာဟောစာတမ်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း … Read more
25.2.2021 မွ 3.3.2021 ထိ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ကံၾကမၼာအထူးေဟာစာတမ္း
25.2.2021 မွ 3.3.2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြ ဒီတစ္ပတ္အတြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား နားမလည္ပါက ေရွ႕ဆက္မတိုးလိုက္ပါနဲ႕။ အလိမ္အညာခံရ၍ ဆုံးရႈံးရကိန္းမ်ား ရွိေနမည္။ ဝန္ထမ္းဆိုတရားမဝင္ေငြေၾကးႏွင့္မရိုးမသား လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရတတ္သည္။ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြဆိုရင္အဓိပၸါယ္မဲ့၊ အက်ိဳးမဲ့စြာ၊ သတၱိလြဲမ်ား ေမြးမိသျဖင့္ မေကာင္းေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ အတိဒုကၡေရာက္ရတတ္သည္။ တတ္နိုင္သမွ်ခရီးေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ခရီးသြား လာရင္းအမႈျပႆနာမ်ားႀကဳံေတြ႕လာရတတ္သည္။ အိမ္ေျပာင္း၊ ေနရာေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္း အလဲကိစၥမ်ားႀကဳံရတတ္ပါတယ္။ ထီေပါက္ခ်င္ပါက အရင္းႏွီးဆုံးမိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္စပ္တူထီထိုးပါ။ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း၊ ဆရာသမားေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ၍ လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ား ေအာင္ျမင္ တိုး တတ္လာ ပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေရာဂါေၾကာင့္မျဖစ္ဘဲ စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေၾကဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါ တယ္။ စိတ္ေၾကာင့္ ေရာဂါရမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါအျပင္အျခားသတိထားရမွာက မသန႔္ရွင္းေသာ … Read more
ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် အသက်အပိုင်းအခြားလိုက် အသေးစိတ်ဟောစတမ်
February 24, 2021 by Thuta Music
ကာသပတေးသားသမီးများသည် အသက် ၁ ၊ ၉ ၊ ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ ၊ ၇၃ ၊ ၈၁ ၊ ၈၉ စသည့် အသက်ပိုင်းအခြားများ၏ … ပထမ(၄)လအတွင်း အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များဖြစ်လတ္တံ့။ ကံအနိမ့်အညံ့ ကနေ ကံအကောင်းဘက်ကို တဖြည်းဖြည်း ကူးသွားပါလိမ့်မယ်။ ညံ့တဲ့အရှိန်လေး တွေ၊ အငွေ့အသက်လေးတွေတော့ နည်းနည်းရှိနေဦးမှာပေါ့ …။ အင်္ဂါနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဆန် ၊ ဆီ ၊ ဆေး ၊ ဆား ၊ စပါး ၊ စိန် ၊ စစ်ဖက်ရေးရာ ၊ … Read more
၂၂.၂.၂၀၂၁ ေန႔၏ ထူးျခားမႈနိမိတ္မ်ား ၂+၂+၂+၂+၀+၂+၁ = ၁၁. ျဖစ္ၿပီး ၁ + ၁ =၂ ပဲ ျပန္ရပါတယ္ ။ ၁၁ ဂဏန္း စိုးမိုးရက္ ျဖစ္သလို ၂ ဂဏန္း စိုးမိုးတဲ့ရက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ထူးျခားတဲ့အေနနဲ႔ တနလၤာေန႔လည္း ျဖစ္ေနပါေသးတယ္ ။ တားေရာ့ အမွတ္စဥ္ ၁၁ နိမိတ္ကဒ္ျပားဟာ Justice ျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီးတစ္ဦးက တိုင္ႏွစ္လုံးၾကားမွာ ထိုင္ေနပါတယ္ ။ ညာလက္မွာ ဓားတစ္ေခ်ာင္းကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဘယ္လက္မွာ ခ်ိန္ ခြင္တစ္ခုကို ကိုင္ကာ ” တရားတစ္ဖက္ ၊ ဓားတစ္လက္ ” ဆိုတဲ့ နိမိတ္ကို ေဖာ္ၫႊန္းျပသေနပါတယ္ ။ ခ်ိန္ခြင္မွာတရားမွ်တမႈကို ရည္ၫြန္းသလိုဓားလြတ္မွာ ထိုတရား မွ်တမႈရရန္အတြက္ … Read more
ညတိုင်းနီးပါး ခွေးတွေအူနေကြတဲ့ အကြောင်း နိမိတ်ကောက် အဟော
February 22, 2021 February 22, 2021 by Thuta Music
ညတိုင်းနီးပါး ခွေးတွေအူနေကြတဲ့ အကြောင်း နိမိတ်ကောက် အဟော အ မင်္ဂလာ မို့ မရေးခဲ့တာပါ။ မိတ်ဆွေ လေးငါးဦး ထံတော့ ဖုံးဆက် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေး၏။ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁ ခွဲ ၂ လောက် ခွေးတွေ တော်တော်အူပါသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်တွေက အူတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ခွေးအူသံ ရှည်၊ ကြာ၊ စွဲ၍ မအူပါ။ အူတာတော့ လမ်းမကြီးတွေဘက်ကဟုသာ ကြားမိပါသည်။ ရုတ်တရက်အူပြီး သိပ်မကြာလိုက် ရပ်သွားပါသည်။ ဂရုတစိုက်နားထောင်ကြည့်ပါသည်။ အသံ မရှည်ပါ။ မကြာပါ။ စွဲ၍ မအူပါ။ ထို့ကြောင့် ပဲ့စင်ကြွေသွား တာတွေ ဖြစ်လာသော်လည်း အူသံစွဲရှည်မကြာ၍ ပဲ့စင်ကြွေလွင့်ခြင်းတို့ ဒီထက်သိပ်မများလောက်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ မှတ်ချက်(၁) လမ်းသွယ် လမ်းကြားတွေမှာ အူပါက … Read more
ရာသီခွင်အလိုက် ကြုံတွေ့ရမယ့် ဖူးစာရှင်များ
ရာသီခွင်အလိုက် ကြုံတွေ့ရမယ့် ဖူးစာရှင်များ ကံတရားက ရွေးချယ်ပေးတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူပုံစံက ဘယ်လိုလေးများလဲ။ ရာသီခွင်အလိုက် ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ချစ်သူပုံစံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Aries – မိဿ ရာသီဖွား ( မတ်လ ၂၁ ရက် – ဧပြီလ ၁၉ ရက် ) မေတ္တာရေးတွင် ရယူခြင်းထက် ပေးဆပ်မှု ကို လိုလားသူဖြစ်သည်။ သနားချစ်၊ အားနာချစ် ကိုဦးစားပေးတတ်သည်။ ဘုခွ ပြောတတ်သော ပျော်ပျော် နေတတ်သည့် သူနှင့် ဖူးစာဆုံမည်။ Taurus – ပြိဿ ရာသီဖွား ( ဧပြီလ ၂၀ ရက် – မေလ ၂၀ ရက် ) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုသည်မှာ သစ္စာတရားရှိမှ ခိုင်မြဲသည်။ … Read more